မော်လမြိုင်က ဖားအောက်တောရရိပ်သာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မော်လမြိုင်က ဖားအောက်တောရရိပ်သာ
Posted by weiwei on Jan 11, 2012 in Photography, Travel | 20 comments
ကားပေါ်ကနေ လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်လိုက်တယ် ..
တောရိပ် တောင်ရိပ်တွေ လွှမ်းနေတယ်
Notice board ပေါ်မှ ကပ်ထားတာတွေ့လို့ ...
မေတ္တာခံယူလိုလျှင် အဲဒီလိုစာပို့လို့ရတယ် ...
ဖားအောက်တောရထဲကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်က ညနေစောင်းဖြစ်နေလို့ ဓါတ်ပုံသေချာရိုက်ဖို့ အချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ ရုံးခန်းကိုသွားပြီး အလှူဒါနပြုရင်း လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တစ်ချို့ဝယ်ဖြစ်တာနဲ့ အချိန်တော်တော်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။
မော်လမြိုင်က ဖားအောက်တောရရိပ်သာဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ အတိတ်ကောင်းတစ်ခုရှိခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အတိတ်ကိုပြန်တွေးရင် အလွန်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်လောက်က ကျွန်မတို့မိသားစု မော်လမြိုင်ကို ဘုရားဖူးလာရင်း သံဖြူဇရပ်မြို့က ဖေဖေ့မိတ်ဆွေရဲ့ မိတ်ဆွေအိမ်မှာ တည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို သန်လျင်ကမှန်းလဲသိရော အဲဒီမိတ်ဆွေက အရမ်းဝမ်းသာသွားပြီး ဖားအောက်တောရမှာ အဲဒီမိတ်ဆွေရဲ့မယ်တော် (သီလရှင်) တစ်ပါးရှိပြီး သန်လျင်ကလူတွေကို အရမ်းတွေ့ချင်နေလို့ နောက်တစ်နေ့ လိုက်ပို့ပြီး တွေ့ပေးချင်တယ်လို့ပြောလာတယ်။ ကျွန်မတို့လဲ ၀မ်းသာအားရဖြစ်ပြီး သွားတွေ့ကြပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် မော်လမြိုင်ဖားအောက်တောရကို ရောက်ဖူးခြင်းပါပဲ။ မယ်တော်ကြီးက သန်လျင်ဘက်မှာ ရိပ်သာခွဲဖွင့်ချင်လို့ မြို့ခံလူတွေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးနိုင်တဲ့လူခံတွေလိုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရိပ်သာခွဲဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့မြေနေရာ၊ သာသနာ့မြေလျှောက်ထားရေးကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးတာဝန်ခံကိစ္စ၊ နေ့စဉ်ကြီးကြပ်ပေးရေးကိစ္စ၊ အလှူဒါနကိစ္စ စသဖြင့် ကိစ္စအ၀၀အတွက် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့် မြို့ခံလိုအပ်နေချိန်မှာ အချိန်ကိုက် ကျွန်မတို့ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်မအဖေနဲ့ဖေဖေ့မိတ်ဆွေတွေဟာ အဲဒီကိစ္စအားလုံးကို တာဝန်ယူနိုင်သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီကနေစလိုက်တဲ့ သန်လျင်ဖားအောက်တောရရိပ်သာကြီးဟာ ယနေ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့မြေနေရာလျှောက်ထားခြင်းနဲ့ ပန္နက်ချခြင်းကစလို့ ပါဝင်ခဲ့တာ ယနေ့အထိပါပဲ။ ကျွန်မအဖေကတော့ မော်လမြိုင်ဖားအောက်ကို ခဏခဏရောက်ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ၁၇ နှစ်အတွင်း တစ်ခေါက်မှမရောက်ဖြစ်တာမို့ အခုတစ်ခေါက်မှာ ပီတိတွေပိုဖြစ်လို့ စိတ်ကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်။
မော်လမြိုင်ဖားအောက်တောရက ဧက ၅၀၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းပြီး တောတောင်တွေနဲ့ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပါတယ်။ ရဟန်း၊ သီလရှင်၊ ယောဂီ စုစုပေါင်း ၅၀၀ ကျော်အမြဲတမ်းတရားအားထုတ်နေတဲ့ ရိပ်သာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားယောဂီတော်တော်များများရှိပါတယ်။ တစ်ပါးကျောင်းများနှင့် တောရဆောက်တည်သလို နေထိုင်ပြီး တရားအားထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆွမ်းအတွက် သပိတ်ပိုက်ပြီး ဆွမ်းခံထွက်ရပါတယ်။ အလှူရှင်တွေက ကိုယ်တိုင်ဆွမ်းလောင်းလှူတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုရှိပါတယ်။ သံဃာတွေများလွန်းလို့ သတ်သတ်လွတ်ဆွမ်းဟင်းနဲ့လောင်းလှူတာတောင်မှ တစ်နပ်ကို ၁၁ သိန်း ကုန်ကျပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းလှူဖို့ အခက်အခဲရှိပေမယ့် အလှူရှင်တွေကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
အလှူထည့်ပြီး ပြန်အထွက်မှာ notice board က စာကပ်ထားတာတွေကို စိတ်ဝင်စားမိတာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်တွင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ် မေတ္တာပို့သခြင်းကို ခံယူလိုလျှင် အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ယောဂီအားလုံးက စုပေါင်းပြီး မေတ္တာပို့သပေးမှာဖြစ်လို့ နေမကောင်းနေသူတွေအတွက် စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် အားပေးကူညီရာရောက်နိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်ရင် ယုံကြည်သလောက် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တာမို့ ထူးခြားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ ရွာထဲမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကော်နက်ရှင်တော်တော်ဆိုးနေတာနဲ့ အခုရက်ပိုင်း ဓါတ်ပုံတင်မရဖြစ်နေတယ် …
အဲဒါကြောင့် မော်လမြိုင်ခရီးစဉ် အခုထိ လက်စမသတ်နိုင်ဖြစ်နေသေးတယ် … နောက်နေ့တွေ အဆင်ပြေရင် တခြားနေရာတွေ ထပ်တင်ဖို့ ကြိုးစားပေးပါအုန်းမယ် …
မေတ္တာ တောင်းခံတာလေးကိုလည်း သဘောကျတယ်။
မေတ္တာအလှူခံပေါ့နော။ အဲဒါလေးက ကျွန်တော် ပထမဆုံးကြားဘူးတာပဲဗျို့။
ကျွန်တော်လည်း မေတ္တာ ပို့သမှု ခံယူလိုပါတယ်ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ကိုင်တုတ်တဲ့ မေတ္တာပို့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျို့။
ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ မေတ္တာပို့တာကို ခံယူလိုပါသည်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ပို့တာ တမျိုးဆန်းတယ်။ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။
ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ မေတ္တာပို့ခြင်းဟာ ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် အင်အားကြီးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပါပဲ။
ဖားအောက်ရဲ့ပုံစံက မော်လမြိုင်နဲ့ သံလျှင် တော်တော်ဆင်တယ်နော်။
တောရိပ်တောင်ရိပ်နဲ့ အေးချမ်းတာရော၊ အရိုးစုထားတာရောပဲ။
ကျနော်လဲ မော်လမြိုင်နဲ့သံဖြူဇရပ်ကိုငယ်စဉ်က အခေါက်ခေါက်အခါခါသွားရပြန်ရပါတယ်။
ရိပ်သာတွေရှိတဲ့ ဖားအောက်၊တော်ကူး၊တံခွန်တိုင်ရွာတွေမှာ ဖေဖေ့မိတ်ဆွေတွေရှိလို့လဲရောက်ဘူးပါတယ်။
နောက်တော့ ဝေးသွားခဲ့တာ အခုမဝေဝေပုံတွေပြန်တင်မှဘဲ အဲဒီပုံထဲကမေတ္တာဓာတ်တွေအပြင်
မေတ္တာဓါတ်က အေးချမ်းတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ …
နေရာဒေသအတူတူချင်းတောင်မှ မေတ္တာဓါတ်လွှမ်းခြုံနေတဲ့ တရားရိပ်သာထဲဝင်လိုက်တဲ့ အအေးဓါတ်က ပိုလို့အေးမြပါတယ် …
မြင်ရတာ အေးချမ်းလိုက်တာဗျာ။ တကယ့်အပြင်မှာဆို ဘယ်လောက်တောင်အေးချမ်းသာယာလိုက်မလဲနော်….
မော်လမြိုင်ဖားအောက်ကို မနှစ်က ခဏရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိတ်ငြိမ် အေးချမ်းပြီး ခမ်းနားတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ အဆောက်အဦးတွေကလဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့။ တရားထိုင်တဲ့ ဓမ္မာရုံကြီးကလဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ တချို့တောင် ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နေရာနှံ့အောင်တော့ မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ အရိုးစုရှိတဲ့နေရာ၊ ကြော်ညာဘုတ်ကပ်ထားတာကဲ့ နေရာ တွေကိုတော့ မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တခါရောက်ရင် သေသေချာချာ သွားကြည့်ဦးမယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ မဝေ။
တကယ်တော့ အဲဒီမှာ တပါးနေ ကျောင်းတဆောင်သွားဆောက်ထားဘို့ စိတ်ကူးဘူးပါတယ်။ ကိုယ်သွားအားထုတ်နိုင်တဲ့အခါလဲ သုံးရ။ သူများအားထုတ်တော့လဲ ကိုယ်ကုသိုလ်ရတာပေါ့။ အဲဒါ ကျွန်တော့်ထုံးစံအတိုင်း အထနှေးနေတာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်သေးတာ ဈေးလဲဆယ်ဆလောက်တက်သွားပါပြီ။ နေရာလဲ ကျန်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။ မဝေေ၀ရဲ့ ပိုစ့်က ကျွန်တော့်ကို ပြန်သတိပေးသလိုဖြစ်လို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မဝေေ၀။
မေတ္တာပို့ရာမှာ သြဒိသမေတ္တာအဖြစ် တဦးတယောက် တစုတဖွဲ့ကို ပိုင်းခြားပို့တဲ့အခါ ဈာန်နီးပါး သမာဓိမျိုးနဲ့ ပို့လျှင် အလွန်စူးရောက်(အကျိုးဖြစ်)ပါတယ်။ ဖါးအောက်ယောဂီတွေက သမထလမ်းမှန်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကျင့်သူတွေမို့ ဈာန်ရပြီးသားတွေတောင် များစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းကမေတ္တာပို့တာခံယူလျှင် အကျိုးများမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဧက ၅၀၀ ကျော်တောင်ရှိတာမို့လို့ နေရာရှိအုန်းမှာပါ … အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူး …
သန်လျင်ဖားအောက်မှာ အမျိုးသားယောဂီဆောင် ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် … တစ်ခန်းကို ၃၆ သိန်းကျမယ်လို့ လျာထားပါတယ် …
မေတ္တာပို့ ခံယူလိုပါသည် ဆိုတာ သဘောကျလိုက်တာ။
ဦးပါပြောသလိုပဲ တကယ့် အကျိုးများမယ့် နေရာပါ။
အရိုးစုက မော်လမြိုင်က သေဌေးသမီး ငယ်ငယ်ချောချောလေးရဲ့ အရိုးစုလို့ကြားဖူးပါတယ်။
အများအကျိုးရှိမယ့် ရိပ်သာကြီး တစ်ခု ဖွင့်နိုင်အောင် ကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့ ဝေေ၀တို့မိသားစုရဲ့ ကုသိုလ်ကို မုဒိတာပွားရပါတယ်။
အမျှမပေးလည်း သာဓု အတင်းခေါ်ရမှာပဲ။
မော်လမြိုင် ဖားအောက်ကိုလည်းရောက်ဖူး အားထုတ်ကြည့်ဖူးချင်ပါတယ်၊
စိတ္တလတောင် ကျောင်းကိုလည်း ရောက်ဖူးချင်ပါတယ်။
ကျွန်မလဲ မော်လမြိုင်ဖားအောက်မှာ တရားအားထုတ်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ် … သန်လျင်လိုနေရာမှာတောင် တော်တော်အေးချမ်းတာဆိုတော့ မော်လမြိုင်က တောတောင်တွေကြားမှာ အလွန်အေးချမ်းမယ်ဆိုတာ သေချာတယ်နေတယ်လေ ….
မော်လမြိုင်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တွေမှာ ဖားအောက်တောရပါလေ့မရှိတာမို့ သီးသန့်သွားမှသာ ရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုခရီးစဉ်က ရန်ကုန်ကနေ အဝေးပြေးကား (ပစ်တိုင်းတောင် PPT) နဲ့ သွားပြီး မြို့ထဲမှာတည်းခိုပြီး သီးသန့်ကားငှားပြီး လျှောက်လည်ကြတယ် …
မဝေရှယ်ပေးတာလေး ကျေးဇူးများလိုက်တာဗျာ ………..
ရုပ်ဝတ္ထုတွေပြည့်စုံလို့ရတဲ့အရသာနဲ့ စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကြောင့်ရတဲ့အရသာကိုကျနော်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါတယ် မတူပါဘူးဗျာ …။
ကျောင်းအ၀င်ဝကိုက အေးချမ်းနေတာနော်၊ တရားစခန်းဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဦးမယ်၊ ကျနော်လည်း တရားစခန်းမ၀င်ဖြစ်တာကြာပြီ၊ မမဝေရေးထားတာလေးဖတ်ရမှ ကျနော့်ကို သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်……..
သဂျီးဓာတ်ပုံကပ်ပြီး မေတ္တာပို့ဖို့ ဝိုင်းတောင်းပန်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ မိုးပြားဂိုဏ်းသား အတ္တခဲ သသနာဖျက် ရုပ်ကြမ်းဝါဒီ သဂျီးတယောက် အေးမြတဲ့ မေတ္တာလှိုင်းမိပြီး နေမထိထိုင်မသာ နာချီခံခက်ဖြစ်တာ မြင်ချင်လို့…။ သဂျီးကျန်းမာ ချမ်းသာ လန်းဖြာပါစေ… ဘယ်လိုနေသလဲ သဂျီး…. မေတ္တာဝိုင်းပို့ဂျပါဗျို့…
တောရကျောင်းရဲ့ ဧရိယာ ငါးရာကိစ္စကတော့ နည်းနည်းလေးအတိမ်းအစောင်းရှိပုံ
ရတယ်လို့ထင်ပါတယ် ( အထင်ပါ ) ကျောင်းဒါယကာကြီးများ သတိချပ်နိုင်ဘို့ပါ
အလှူရှင်တွေပေါတိုင်း ကျောင်းဘေးပတ်လည်က ရာဘာခြံတွေကို
တိုင်းမှူးအမိန့်နဲ့ ဆိုပြီးဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီး
ဓမ္မရဲ့ သဘောမှာ မစင်ကြယ်သော အရပ်ဖြစ်သွားရင် သက်ဆိုင်ရာ
ဒါယကာကြီးများ မာလကဈာန်ကြွ မဖြစ်စေဘို့ပါ
ဆိုခြင်တာက ဆရာတော်တွေရဲ့ စင်ကြယ်မှု့နှင့် ရောဂီတွေရဲ့ သဒ္ဓါဟာ
အညွှန်း။ ။ သက်ဆိုင်ရာတောရဘေးခြံက လူတွေက မိမိတို့ရဲ့ မမြဲတဲ့ဥစ္စာအရေးကို
ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ရဲ့ မေတ္တာဖြင့် ပိုင်ရှင်ရှိသောမြေ ကျောင်းဧရိယာ မချဲ့ထွင်းရ ဟူလေသတတ်
လက်ဆင့်ကမ်းတပည့်များ တရားအားထုတ်ကြကုန်သော ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်း နှင့်
အဟံ အကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီချီးဘတ် သည်
သူတော်ကောင်းတို့ သည် သူတော်ကောင်းတို့ တည်မှီရာအရပ်တွင်
သူတော်ကောင်းတို့ပြုသော အမှု့ကို ပြုကြပေကုန်၏ဟု
ဤ မဟာပထဝီမြေကြီးကို မှီတည်၍ ဥဒါန်းရင့်ကျူးရပါတော့သတည်း။
သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ….
ဒါကြောင့် ဓါတ်ပုံတွေထဲကနေပဲ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ခြင်းများစွာဖြင့်
ဖားအောက်မှာ တရားထိုင်ရင် ၁နာရီ ခွဲ ဆိုတဲ့ အချိန်ကို ကြည့်ကြည့်ပြီး တော်တော် အားယူနေတာ အခုထိကို ဖားအောက်ကို မရောက်ဖူးသေးပါဘူး။
ပုံထဲမှာ မြင်ရတာတောင် မေတ္တာရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ခံစားနေရတယ်။
တစ်နာရီခွဲဆိုပေမယ့် အရမ်းမတင်းကြပ်ပါဘူး … လုံးဝမလှုပ်ရလို့လဲ စည်းကမ်းမထုတ်ထားပါဘူး … တကယ်တမ်း သမာဓိရပြီဆိုရင် တစ်နာရီခွဲဆိုတာ ခဏလေးပါ … တစ်ခါလောက် စမ်းကြည့်ပါလား …
မော်လမြိုင်ကို တခါမှမရောက်ဖူးပါ…. ဓါတ်ပုံကြည့်ရတာနဲ့တင် အေးချမ်းသွားတာပဲ…ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ